Hal abuur da'yarta qurba joogta ah ku fahansiinaya suugaanta qaab ay fahmi karaan - BBC News Somali
Hal abuur da'yarta qurba joogta ah ku fahansiinaya suugaanta qaab ay fahmi karaan
Sannad kasta maanta oo kale, waxa la xusaa maalinta suugaanta adduunka.
Hay'adda Qaramada Midoobay ee UNESCO ayaa sheegtay in ujeedada laga leeyahay xuskani ay tahay in la dhiiri geliyo akhriska, barashada, curinta iyo faafinta suugaanta, si loo ilaaliyo afafka dunida isla markaana la isugu soo dhaweeyo dhaqannada dunida.
Waxase jira afaf badan oo dunida ka dabar go'ay iyo kuwo la leeyahay haatan bay dhabbihii dabar go'a cagta saareen, afafkaa farta lagu fiiqay waxa ka mid ah Af-Soomaaliga oo tan iyo markii dawladii dhexe ee Soomaaliya burburtay dayacnaa, waxase kacay jiil dhalin yaro hal abuura oo u heelan haqab tirka Af-Soomaaliga.
Dhalinyaradaa waxa ka mid ah Cabdillaahi Xasan-Ganey oo ku nool magaalada Minnesotta ee dalka Maraykanka oo Axmed-nagaashe uga waramay duruufaha Af-Soomaaligu haatan ku sugan yahay, wuxuse marka hore waydiiyay Suugaantu waxa ay tahay?
Maqal Biyo dhulka ka soo baxaya oo cabsi ku haya magaalada Boorama
Biyo dhulka ka soo baxaya oo cabsi ku haya magaalada Boorama
Maqal Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo eedeeyay Cabdiweli Gaas
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo eedeeyay Cabdiweli Gaas
Maqal Maxaa lagu micnayn karaa imaatinka madaxda ONLF ee Jigjiga?
Maxaa lagu micnayn karaa imaatinka madaxda ONLF ee Jigjiga?
Maqal Maamulka Magaalada Mandera oo sababo caafimaad u xiray ceel-biyoodyo
Maamulka Magaalada Mandera oo sababo caafimaad u xiray ceel-biyoodyo
Maqal Maxaa lagu xasuustaa Madaxweynihii hore ee Mareykanka George H W Bush?
Maxaa lagu xasuustaa Madaxweynihii hore ee Mareykanka George H W Bush?
Maqal Dowladda Talyaaniga oo meelmarisay sharci adag oo ka dhan ah muhaajiriinta
Dowladda Talyaaniga oo meelmarisay sharci adag oo ka dhan ah muhaajiriinta